65. Chin Nationalstag Feiern Photos
February 21st, 2013 65. CND 2013, Frankfurt, Germany
65th Chin National Day
February 20th, 2013 (၆၅) ကြိမ်မြောက်ချင်းအမျိုးသားနေ့ကျင်းပသည့်ပွဲအကြောင်းသတင်းပြန်ကြားခြင်း
(၆၅) ကြိမ်မြောက်ချင်းအမျိုးသားနေ့ ကို ဂျာမနီရောက်ချင်းလူမျိုးများမှ ဖွဲ့ စည်းသည့် ကျင်းပရေးကော်မတီ ဦးဆောင်မှု့ ဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၆) ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီမှစတင်ကာ Saalbau Fechenheim, Frankfurt am Main,Germany ၌ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိူင်ခဲ့ကြပါသည်။
(၆၅) ကြိမ်မြောက်ချင်းအမျိုးသားနေ့အခန်းအနား သို့ ဂျာမနီရောက် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိူင်ငံမှ တိုင်းရင်းသား ညီကိုများ၊ ဂျာမန်မိတ်ဆွေများ နှင့် ချင်းလူမျိုးများ အားလုံးစုစုပေါင်း (၆၀) လောက် တတ်ရောက်လာနိူင်ကြပါသည်။
(၆၅) ကြိမ်မြောက်ချင်းအမျိုးသားနေ့ အခန်းအနားတွင် ချင်းအမျိုးသားနေ့ မိန့် ခွန်းကို Pu Biak Hmun Thang မှ လည်းကောင်း၊ ချင်းလူမှုရေးအသင်းဥက္ကဌ Pu John Aung Ling မှ အသင်း၏ သ၀ဏ်လွာ ကို လည်ကောင်း၊ Pu Za Uk Sang မှ ချင်းအမျိုးသားတတ်ဦး၏ သ၀ဏ်လွာကို လည်းကောင်း အသီးသီး ဖိတ်ကြား (၀ါ) မိန့် ကြားခဲ့ကြပါသည်။ ထို့ နောက် CNA/CNF အဓိပဓိကောင်စီဝန် ဆလိုင်း ကိခ်ခိုလျန်းမှလည်း ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးနှင့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအကြား ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိစ္စကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျင်းပရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ Pu Peter Lingling Thiang မှ လည်း (၆၅) ကြိမ်မြောက်ချင်းအမျိုးသားနေ့ ဖြစ်မြောက်အောင် အစစ အရာရာပါဝင် ကူညီခဲ့ကြသူများ နှင့် လာရောက်ချီးမြှင့်ကြသူများအား ကျေးဇူးတင် စကားပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
ချင်းရိုးရာ ၀တ်စုံပြပွဲ နှင့် ချင်းရိုးရာ အကပြပွဲ များကိုလည်းတင်ဆက်ပြသနိူင်ခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ဖြစ် မြောက် နိူင်အောင် အစစအရာစီစဉ်ပေးသူ Daw Khuang Cer အားအထူးကျေးဇူး တင်ရှိပါသည်။ ထိုပြင် Nürnberg Chin Christian Fellowship လူငယ်များမှ လည်းရိုးရာအက ဖြင့်ပါဝင်ပြသတင်ဆက်နိူင်ကြတာလည်းဝမ်းသာစရာတွေ့ ရပါတယ်။ အစစအရာရာ အားတတ်သရော ကိုယ်တိုင် သင်ပေးသူ Olivia Biak ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်အပ်ပါသည်။ မိမိအမျိုးသားနေ့ စည်ကားသိုက်မြိတ်စွာ ကျင်းပနိူင်ရေးအတွက် မိမိ အစွမ်းအစ၊ အချိန် နှင့် ငွေ ကုန်ကျခံကာ ခေတ်ပေါ် အက ကို လူငယ်များအားသင်ပေးသူ Chanchan
& Mawia ဇနီးမောင်နှံ ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အဖွဲ့ အစည်းနှင့် မပာုတ်ပဲ ပုဂလိက အနေနှင့် အခုလို အမျိုးသားနေ့ အတွက် အချိန်နှင့် ငွေ ကုန်ကျခံခြင်းသည် ကျနော်တို့ ဂျာမနီ ရောက်ချင်းမိသားစုများအထဲမှ ပထမဆုံး အကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုလို ကိုယ်ထူကိုယ်ထ အမျိုးသားနေ့ အတွက် ပေးဆပ်သူ Chanchan & Mawia ဇနီးမောင်နှံတို့ အား buy cheap viagra ချင်းလူမှုရေး အသင်း (ဂျာမနီ) နှင့် ကျင်းပရေးကော်မတီတို့ မှ ၀မ်းသာကြောင်းမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။ ခေတ်ပေါ်အက ကို စိတ်ရှည်စွာနှင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကပြသွားခဲ့ကြသော ဖရန့် ဖော့် မြို့ မှ ချင်းလူငယ်များအားလည်း အထူးပဲကျေးဇူးတင်အပ်ပါသည်။
ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်၌လည်း တီးဝိုင်းအဖွဲ့ မန်နေဂျာ ကို Aa Hmun မှ ဦးဆောင်ကာ Ko Franky, Ko Billy Kim, Ko Suanno, Ko Aa Nial တို့ မှ လက်ရည်ပြ တီးခိုက်ခဲ့ကြပြီး Ko Cungcung, Ko Ukpi, Ko Aa Lian တို့ မှအလှည့်ကျ အသံထိန်းပေး ကြသဖြင့် ပါဝင် သီဆိုသူများအပြင် နားသောတရှင်သူများပါ အားရကျေနပ် ပျော်ရွင်ခဲ့ကြပါသည်။
အထူးအစီအစဉ်အဖြင့် ကချင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် အလှူငွေကောက်ခံ ပေးခဲ့ပါသည်။ အလှူစာရင်းကို သီးသန့် တင်ပြပေးထားပါမည်။
အစားအစာ အဖြင့် ထမင်းကြော်နှင့်ခေါက်ဆွဲကြော် များကို တတ်ရောက် ချီးမြှင့်လာသူ များအား အလကား ကျွှေးပါသည်။ သို့ သော် ချင်းရိုးရာအစားအစာ Sabuti ကိုတော့ ချင်းလူမှုရေးအသင်း(ဂျာမနီ) ရံပုံငွေ အတွက်ရောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့ ပြင်ကံစမ်းမဲကိုလည်း အသင်းရံပုံငွေအတွက် ရောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ ချင်းရိုးရာအစားအစာ ချက်ပြုပေးသည် သာမက ကိုယ်တိုင် ရောင်းပေးသူ Pu Van Hleih Cung ကို လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
ဒီနှစ် (၆၅) ကြိမ်မြောက်ချင်းအမျိုးသားနေ့ တွင် ပြုလုပ်သည့် အခန်းအနားအစီအစဉ်၊ ရိုးရာပြပွဲအစီအစဉ်၊ အစားအသောက်အစီအစဉ် နှင့် ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ် များသည် တစ်ခုနှင့် တစ်ခု cialis buy ချော်မော ဆီလျော် စွာဖြင့် တာဝန်ကျသူ များမှ တာဝန်ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိူင်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့ ကြောင့် (၆၅) ကြိမ်မြောက်ချင်းအမျိုးသားနေ့ ပွဲကို ဘာပြသနာမှရှိပဲ ည ၁၀ နာရီလောက်တွင် တတ်ရောက်ချီးမြှင့်သူများအတူတကွ ၀ိုင်းကခြင်း၊ တီးဝိုင်းအဖွဲ့ ဝင်များနှင့် ၀ါသနာရှင်များမှ ရခိုင်ရိုးမ တောင်တန်းနှင့် ဆက်နေတဲ့ ချင်းတောင်တန်း (ဆလိုင်းသောန သီချင်း) ကို ၀ိုင်းသီဆိုကြခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာ ရှိုပ်သိမ်းခဲ့ကြ ပါသည်။
(၆၅) ကြိမ်မြောက်ချင်းအမျိုးသားနေ့ကျင်းပပြီးစီးသည့် အခါမှာလည်း အခန်းသန့် ရှင်းရေး၊ ပစ္စည်းများသိမ်းစည်းရေး တို့ တွင် တတ်ကြွစွာ ကူညီသူ လူငယ်၊ လူကြီးအားလုံးကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်အပ်ပါသည်။ တတ်ရောက်သူများမှ (၆၅) ကြိမ်မြောက်ချင်းအမျိုးသားနေ့ ပွဲ အပေါ် ကောက်ချက် ချချက်များ။
ပွဲကျင်းပလာခဲ့သည့် အရင်နှစ်များနှင့် အခုနှစ် အခြေအနေ အစစအရာရာ အများကြီး အကောင်းဘက်ကနေ တိုးတတ်လာတာတွေ့ ရလို့ ဝမ်းသာတယ်ဗျာ။
Pu Van Hleih Cung
(၆၅) ကြိမ်မြောက်ချင်းအမျိုးသားနေ့ သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဖရန့် ဖော့်မြို့ ။
Posted in Press&Statements | No Comments »
2012 Sommerfest Fotos
August 26th, 2012 viagra price
February 29th, 2012 CHIN COMMUNITY( GERMANy)e.V.
Posted in Events | Comments Off on Mitteilung des (64) Chin National Tag feiern, in Frankfurt/M
(64) Chin National Day Photos
February 24th, 2012 buy viagra canada
Posted in CND | No Comments »
2nd. ECF Championship Cup, Esbjerg, Denmark 2011
August 17th, 2011 2nd. European Chin Football Championship, Esbjerg Denmark Photo
June 27th, 2011 buy sildenafil online
viagra for cheap Posted in CND | No Comments »
Germany Chin National Day 2011 DVD
April 4th, 2011 Vorbestellung ?
Tel: ++49 -0 82 71/4 20 57
ciprofloxacin 500 mg cheap cialis online withoutapersciption
63th Chin National Day invitation
January 10th, 2011 canadian pharmacy
CCG ev Press release – Chin National Day
November 25th, 2010 viagra pill